I-China 7in 1 USB3.0 Type-C3.0 to HDMI Type-C SD/TF Docking station yabakhiqizi nabahlinzeki be-Surface Pro 7 |Wellink
7in 1 USB3.0 Type-C3.0 to HDMI Type-C SD/TF Docking station for Surface Pro 7
Idizayini ye-Surface Pro 7 Inothi 1: Le dokhi yangaphezulu ngeke ilingane kahle nendawo yakho uma usebenzisa ikesi lokuvikela kuyo.Ihambisana ne-Microsoft Surface 7.* Qaphela2: Ayihambisani ne-Surface Go/Surface Pro 3,4, 5, 6.
Uxhumano lwe-Ethernet olunesivinini esikhulu
Imbobo ye-Ethernet engu-1000Mbps ephezulu-isivinini sokusefa ku-inthanethi, ukusetshenziswa kwendawo yonke esebenza endaweni ehlukene.
I-adaptha ye-4K HDMI:Bonisa ngokukhululekile ukulungiswa okuphezulu kwekhompuyutha yakho ephathekayo engu-4K UHD@ 30Hz noma ividiyo egcwele ye-HD 1080P ku-HDTV, qapha noma iphrosesa ngembobo ye-HDMI, ukusekelwa okusemuva kwe-2K / 1080p / 720p / 480p / 360p izinqumo.
I-Mirror Display ModI-e& Yandisa Imodi Yokubonisa.
Inweba isikrini sakho ngembobo ye-HDMI futhi isakaze ngokuqondile ividiyo ye-4K @60Hz ku-HDTV, izibonisi, noma amaphrojektha.I-high-resolution 4K @60Hz HDMI MacBook Pro Donlge Adapter ikulethela umphumela ocacile wokuvumelanisa ividiyo.Iphelele ukusakaza ifilimu ye-HD egcwele ku-HDTV yakho;Nweba igeyimu yevidiyo ye-3D kumamonitha akho noma ubonise i-PPT yakho ngamaphrojektha wemihlangano yasehhovisi nokuzijabulisa, okukunikeza ulwazi olubonakalayo olucacile njengokungathi usendaweni yesigameko.
Izikhala zekhadi le-SD (USB 3.0 Speed)
• I-SD Slot: Isekela i-SD, i-SDXC, i-SDHC, i-RS- MMC.
2 x USB 3.0 izimbobo
• Isilinganiso Sokudluliswa Kwedatha Esikhulu 5 Gbps.Dlulisa imuvi ngemizuzwana.
• Inikeza ukufinyelela okungenazihibe kukhibhodi enentambo ye-USB 3.0, igundane, i-USB flash drive,i-smart phone, ithebhulethi, njll. eya emuva esebenzisana namadivayisi e-USB 2.0/1.0.
Igobolondo le-Aluminium Alloy
Iklanywe nge-aluminium-alloy eshelelekile, umngane obalulekile wayo yonke ikhompyutha ephathekayo yohlobo c.
Uma kuqhathaniswa nama-adaptha epulasitiki, kusetshenziswa igobolondo le-aluminium alloy, i-Gllitra USB-C Hub idala i-adaptha esesitayeleni nephephile, ehlala isikhathi eside, esebenza kahle, nenhle i-USB C.Igobolondo le-aluminium futhi linikeza ukuchithwa kokushisa okusheshayo ukuvikela amadivayisi akho.
Ukuvikela Okuthembekile Nokulawulwa Kwezinga lokushisa
Umsebenzi ngamunye ufakwe i-chip ehlukile, isebenza kahle.Idizayinelwe ukuvikela ukushisa ngokweqile, ikwenze kuphephe futhi kuthembeke uma izimbobo eziningi zigcwele.
Umbuzo:Ungakwazi yini ukusebenzisa izimbobo eziningi ngesikhathi esisodwa?Noma eyodwa nje ngesikhathi?
Impendulo:Angiwasebenzisi wonke amachweba ngesikhathi esisodwa ngoba anginaso isidingo esingako.Ngisebenzisa amachweba angafika amahlanu ngesikhathi esisodwa.I-USB C HUB isebenza kahle.Kuyashisa kancane kodwa kujwayelekile.
Umbuzo:Ingabe ukuxhuma/ukukhipha i-adaptha nsuku zonke kuzoqala ukuba nomthelela ekuzinzeni kwayo noma ukuqina kwechweba le-Mac ngokuhamba kwesikhathi?Ingabe kungenzeka umonakalo ekugcineni?
Impendulo:Nginokukhathazeka okufanayo nokwakho.
Nginayo le-USB C Hub futhi sengivele ngiyisebenzise izikhathi ezingaphezu kwezimbalwa.Kuze kube manje ayikavezi zinkinga.Akusho ukuthi ngeke esikhathini esizayo nokho.
Umbuzo:Ingabe leli yunithi liyashisa?Nginenye efanayo okuthi ngemva kwemizuzu emi-5 ifike ishise kakhulu futhi yonke into exhunywe kuyo bese kushisa nayo.
Impendulo:Kancane, Kepha ngicabanga ukuthi kuyisimo esijwayelekile ukuthi i-adaptha ye-HUB ifudumale ngesikhathi sokusebenza(kodwa ingashisi).Ngoba i-adaptha ye-HUB idinga amandla athile ukuze isebenze.
Umbuzo:Kuthebula elilinganayo noma eliyisicaba, ingabe izixhumi ziqondaniswe kahle kangakanani nezimbobo?Ngifuna ukukwazi ukuslayida iyunithi ngaphandle kokuyiphakamisa.
Impendulo:Yebo, ngingayifaka kalula ngesandla esisodwa bese ngivele ngiyiphushele phakathi. Ngeke kube khona ukuminya, ngakho-ke udinga ukuphakamisa ikhompuyutha futhi uyifake.
Umbuzo:Ingabe le macbook pro usb c hub ishaja kuphela ngembobo ye-Thunderbolt noma ungasebenzisa enye i-usb-c?
Impendulo:Ishaja kuphela ngembobo ye-Thunderbolt, enye i-usb-c eyedatha kuphela.
Umbuzo:Ingabe izimbobo ze-usb 3.0 kule hub ziyasebenzisana nekhebula le-anker usb ukuya kumbani ukuze lishaje ama-iphone?
Impendulo:Uxolo, kodwa izimbobo ze-USB 3.0 kule hubhu zisekela ukudluliswa kwedatha.Azikusekeli ukushaja noma ukuboniswa kwemidiya.
Umbuzo:Ingabe udinga ukuthi i-adaptha yamandla ixhunywe ukuze usebenzise idokhi?
Impendulo:Cha, ungasebenzisa futhi ihabhu le-USB C ngaphandle kokuxhuma i-adaptha yamandla kuyo.Ungase unikeze amandla angaphandle ehabhu ngembobo ye-USB C uma uxhuma amadivayisi alambele amandla kuyo.
Umbuzo:Ingakwazi ukusebenzisa amamonitha amabili kulesi sikhangisi ngesikrini esinwetshiwe (esingefani)?
Impendulo:Yebo, ngizamile ukuxhuma amamonitha amabili ngesikhathi esisodwa, le adaptha ye-HUB ingasebenzisa iziqaphi ezimbili.Ungakwazi ukuxhuma isibonisi esisodwa embobeni ye-HDMI, nesinye embobeni ye-Thunderbolt 3 yohlobo C.
Amamonitha amabili angabonisa isithombe esihlukile.
I-Surface Pro 7
Okwedlule: 7in 1 USB3.0 Type-C3.0 to HDMI USB3.0 Type-C SD/TF Docking station yeSurface Pro 7
Olandelayo: I-adaptha ye-gallium nitride engu-65w 12 kudokhi yohlobo C engu-1(2 ku-1)